EyoMsintsi 19, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Kwakhona, iarhente yokuthengiswa kwezindlu ikukhuthaza ukuba usayine ikhontrakthi kwiinkonzo ezingavumeli ukuba usebenzisane naye nabani na ngaphandle kwakhe kwaye ungazibeki uludwe lomhlaba ngokwakho.
Ngaloo ndlela, i i-realtor izama ukunqanda ukuhamba kwabathengi ngqo kunye nokwandisa amathuba ikhomishini yakhe. Kwakhona, musa ukuhlawula ngokuthengwa okungxamisekileyo komhlaba kuba ngumqondiso wokuba umhlaba uyathengiswa.
Ukuba uthatha isigqibo soku thengisa umhlaba ngokuzimeleyo Makhe sijonge le nkqubo kwiinkcukacha ezingakumbi.
Yazisa abamelwane, izihlobo kunye nabahlobo malunga neenjongo zakho, unamathelise uluhlu lomhlaba kwiibhodi zezaziso.
Nangona kunjalo, uluhlu lomhlaba kwi-Intanethi lufumana inani eliphezulu leembono.
Yintoni intengiso kwi-Intanethi? Ungenisa njani uluhlu lwakho lomhlaba kwaye kufuneka siqale phi?
Ke ngoko masibuyele kuludwe lomhlaba! Ndiza kuzama ukuchaza imigaqo-siseko yabameli abaqhelekileyo benze iiarhente kwaye uya kuqonda indlela ehamba ngayo, kwaye kunokuba kufanelekile ukuyizama. Emva kokuyijongisisa, uya kuba nakho ukusebenzisa le migaqo ngokwakho ngemali encinci kakhulu.
Ke ufuna ukuthenga umhlaba. Ukuba usebenzise iinkonzo zearhente, ufumana umthengi omtsha, kwaye uqalisa ukufunda zonke izindululo kwimiba ephakanyisiweyo kwaye ngamanye amaxesha uyilahle kuye njengomthengi wakhe omtsha. Kwangelo xesha, ngakumbi ii-arhente ezingamavila azikhathazeki nokucoca inkunkuma (umoya ofanayo, izibonelelo ezingekhoyo) kwiinguqulelo zazo eziprintiweyo. Ke, isiphakamiso sikhethwe.
I-Intanethi yindawo apho lonke olu lwazi lufumaneka ngokuphezulu kwaye lufumaneka ngokukhululekileyo. Ungakhangela ngokwakho ngokwakho konke ukubonelelwa esixekweni okanye kwingingqi onomdla kuyo ngokukhangela kwiiwebhusayithi zokuthengiswa kwezindlu njengearhente yenyani.
Imeko echaseneyo, xa ufuna ukuthengisa umhlaba. Iarhente ibonelela ngayo umhlaba womxhasi wayo? Umenzeli oqhelekileyo uya kuzama ukubeka uluhlu lomhlaba othengiswayo kwiindawo ezahlukeneyo ngexesha elinye, ngokwenza oko, uzama ukuchaza ngokupheleleyo zonke izibonelelo zesindululo sakho. Kuba kufuneka kuqala abonise umgangatho womsebenzi wakhe. Okwesibini, kufuneka yenziwe kwezinye izizathu ezininzi. Kutheni le nto kufanelekile ukuba uchaze ngokufanelekileyo isindululo sakho kuluhlu lomhlaba? Umthengi, ukubona uluhlu lwakho lomhlaba kufuneka ngokukhawuleza lufumane inani elikhulu lolwazi malunga nale nto yokuthengisa izindlu nomhlaba. Kwaye umthengi kufuneka akhumbule uluhlu lwakho lomhlaba !!! Cinga nje ngayo, umthengi onokubakho kuya kufuneka akhethe kwinani elikhulu leendlela ezahlukeneyo. Unikezo lwakho kufuneka lukhunjulwe ngumthengi, hayi ukuba ulahliwe njengokungakhathali.
Ukubekwa kuluhlu lomhlaba
Sicebisa ukuba ungabeki uluhlu lomhlaba kuzo zonke iisayithi zepropathi. Kuba kukho amathuba aphezulu okulibala iidilesi kunye nolwazi lokungena kwiiwebhusayithi emva kokuthengisa kunye nokufumana iifowuni ixesha elide. Ngokwesiqhelo kwanele ukubeka uluhlu lomhlaba wentengiso yasimahla kwi-realtyWW kunye neyenye yezona portal ezinkulu zommandla.
Ukwenza udweliso lomhlaba olusebenzayo luyimfuneko:
Yenza kwaye wongeze imifanekiso emi-5 ukuya kwesi-10 kwisakhiwo ngokwaso, kunye nezibonda ezikhanyayo, iindlela, izindlu elumelwaneni;
Chaza kwisicatshulwa somhlaba wakho uluhlu: ubunini, ukubakho konxibelelwano, uluhlu lwawo onke amaxwebhu afumanekayo, indawo, ubude, ububanzi kunye nenombolo yepasesi yecadastral;
Ungabhali ngezinto ezisobala, kwaye ungasebenzisi amagama anje: andifuni ukuthengisa, kodwa kuyimfuneko; indawo entle; awuyi kuyifumana ngexabiso eliphantsi; ngokungxamisekileyo; urhwebo;
Qinisekisa naluphi na ulwazi kunye nezibakala. Umzekelo, endaweni yokuthi "irhasi izakufumaneka kungekudala" bhala-ubhaliso lwedolophana phantsi kwenkqubo yomanyano lucwangciselwe unyaka ka-2017, ke igesi iya kubakho kunyaka olandelayo;
Yongeza ibinzana elithi "umhlaba ulungele ukwakhiwa ', ukuba kunjalo.
Mhle! Uluhlu lomhlaba lulungile!
Ungayenza njani ukuba umthengi onomdla abe nomdla kwintengiso yakho? Ngaba kufanelekile ukuba kuthunyelwe uluhlu lomhlaba kumaphephandaba kunye neemagazini?
Ukwenza uluhlu lwakho lomhlaba lubangele umdla kumthengi onokubakho, kuya kufuneka uchaze iinkalo ezimbalwa ezahlukileyo kwiintengiso zakho. Ingaba yinkcazo entle yendawo, into, iifoto ezintle ezithathwe ecaleni kwendawo yokuhlala, njl.
Kuya kufuneka siqiniseke ukuba umthengi uza kukhumbula uluhlu lwakho lomhlaba kwaye uya kubuya kwakhona ekuqwalaseleni kwakhona ngononophelo. Ukuba oku kuyenzeka, inyathelo elilandelayo kukufowuna ifowuni yakho ukuba ihlaziye idatha echazwe kuludwe lomhlaba, kwaye kuphela emva koko ukuxoxa ngesivumelwano.
Ukulungiselela le njongo kufuneka uchaze into yakho kangangoko unakho kwaye wenze uluhlu lomhlaba njengekhadi leposi yeKrisimesi. Emva kwako konke ukwazi, inani elikhulu learhente kunye neenkampani ezinkulu zityala imali kakhulu ekuthengiseni iinkonzo zazo, kunye nentengiso yezinto zabo banokuzithengisa, zimema abathengi abanokubakho. Bayenza kwimali enokuthengiswa ngabathengi ngokuzimeleyo xa bebhengeza iipropathi zabo kwaye kunokwenzeka ukuba bayithengise ngexabiso eliphantsi, kodwa ngenxa yezizathu ezahlukeneyo baguqukele kubalamli.
Umkhankaso omkhulu wentengiso unokuba yingenelo kuphela kubathengisi abakhulu (umz. Xa iiplani ezinkulu zithengiswa kwilali yeholide). Kule meko, inkampani inamacandelo akhethekileyo entengiso. Kodwa kumniniyo uku-oda intengiso enjalo kwi-arhente yentengiso akunakwenzeka ngenxa yeendleko eziqwalaselweyo.
Ke ngoko, kuya kufuneka ukuba kusetyenziswe iindlela esele zizamisiwe kwaye zavavanywa zentengiso yepropathi. Uluhlu lomhlaba lunokudalwa ekhaya kunye neendlela ezincinci. Amaphephandaba kunye neemagazini ngoku azinakunceda; ngenxa yoko ukuhlawulela uluhlu lwexabiso lomhlaba olubiza kakhulu njengephephandaba alikho ngokwemali kwaye alinamali. Isiphelo - yiya kwi-intanethi ngokubekwa kuluhlu lomhlaba.
Ukuthengisa ngentengiso yomhlaba okanye irente kwiwebhusayithi yethu simahla nceda ulandele eli phepha le-http: //realtyww.info/item/new
okwenyaniWW Septemba 19, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Ntengiso Umhlaba, Yenza intengiso yasimahla, Intengiso yoMhlaba uyathengiswa, Yenza intengiso yoMhlaba weSimahla, Yenza intengiso yoMhlaba weSimahla, Umhlaba wentengiso, Umhlaba wentengiso uyathengiswa, Umhlaba weNtengiso wasimahla, Iintengiso zeMhlaba zaSimahla, Intengiso yasimahla yomhlaba, Intengiso yasimahla yomhlaba, Umhlaba asimahla wentengiso, Uluhlu loMhlaba asimahla, Uluhlu lwasimahla lweZindlu, Uluhlu lweArhente yeZindlu zeHlabathi, Intengiso yomhlaba, Intengiso yomhlaba, Umhlaba werenti, Umhlaba uyathengiswa, Intengiso yeNtengiso yomhlaba, Umhlaba wentengiso yasimahla, Uluhlu lomhlaba lokuThengisa, Uluhlu lweMihlaba, Uluhlu lweMihlaba yokuthengisa, Ukuthengisa koMhlaba, Ukuthengisa komhlaba, Uluhlu lwentengiso yearhente, Uluhlu lweNdawo yeNtengiso ye-Intanethi, Umhlaba wokuThumela, Umhlaba wokuThengisa uyakuthengiswa, Thumela umhlaba ngeNtengiso yasimahla, Thumela Uluhlu lweeNdawo zokuThengisa, Uluhlu lwePropati, Uluhlu lwezezindlu, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweeNtengiso zeNtengiso, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu simahla, Uluhlu lweearhente zeZakhiwo kwi-Intanethi, Uluhlu lweeNdawo zeNdawo zokuThengisa izindlu, Uluhlu lwentengiso, Thengisa Umhlaba, Ukuthengisa umhlaba, Intengiso yoMhlaba uyithengiswa, Apho Ungathumela Uluhlu lweeNdawo zeeNdawo zisimahla. Bookmark le Permalink.
Juni 2, 2016 Iingcebiso zeNtengiso yasekhaya yoMthengisi wexesha lokuqala Kukho ulwazi oluninzi phaya malunga nokuthenga indlu okokuqala, kodwa akukho phantse kangako malunga nokuthengisa okokuqala. Ixesha lokuqala lokuthengisa ikhaya lakho kunokuba yinto eyoyikisayo njengokuthenga kwakho okokuqala, kwaye ufuna ukwenza konke onako ukuqinisekisa ukuba ufumana elona xabiso liphezulu. Enye yezona zinto zibalulekileyo xa kuthengiswa ikhaya lakho kukuyithengisa ngokufanelekileyo. Nazi ezinye zeengcebiso ngendlela yokwenza oko. Sebenza nearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba Uninzi lwabantu blanch xa ucinga […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi